Semalt: Olee otú iji gbochie nzaghachi spam - Na-eme ka Atụmatụ Cheta
Blog na-agba ọsọ ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ e-azụmahịa bụ ahụmahụ na-enye afọ ojuju ma na-enye ụgwọ ọrụ nke na-enye ọtụtụ ohere iji zụlite azụmahịa na ịmepụta ohere. Otú ọ dị, ọtụtụ idiots na-agbalị imebi ụlọ ọrụ ndị dị n'ịntanetị ma mepụta ihe mgbochi nye onye ọ bụla n'enweghị ezi ihe kpatara ya. Ha na-achọ ime ihe ọ bụla karịa ịmepụta ọgba aghara, na onye na-edegharị spammers bụ otu n'ime ha. Ọ dị mma ịsị na ndị na-agba afa na ndị na-agba ọsọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ graffiti na ịntanetị bụ ndị na-achọ mgbe niile ịhapụ akara akara na ntanetị.
Ọ bụrụ na i nyochaa akaụntụ Google Analytics ma chọpụta mmụba nke ndị na-ezigara site na ebe nrụọrụ weebụ amaghị, enwere ike ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ dịkwa gị mkpa ime ngwa ngwa ngwa ngwa. Ebe nrụọrụ weebụ na-eziga spam referral bụ hulfingtonpost.com, priceg.com cenoval.ru, na bestwebsitesawards.com. O nwere ike iyi ihe dị njọ, ma ọtụtụ n'ime webmasters na ndị na-ede blọgụ enweghị echiche na saịtị ha na-enweta echiche na-adịghị ọcha, ihe ka ọtụtụ n'ime ha si na saịtị ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu.
Na-ama jijiji, Max Bell, Onye Ọrụ Gbasara Azụmahịa nke Ọkachamara , na-enye ebe a ụzọ iji gbochie saịtị ndị ahụ ma kwụsị ọrụ ha iji mee ka azụmahịa gị dị njọ na ịntanetị.
Jiri faịlụ .htaccess iji merie spam nyocha
Ọ bụrụ na saịtị gị kwadoro site na Apache webserver, ị ga-emelite ya..faịlụ htaccess. Ụzọ kachasị mma bụ igbochi faịlụ .htaccess iji wepu ndị spammers na ndị ọjọọ bots. I nwekwara ike redirect ha na Apache nke nwere ike ọ gaghị adịrị ha mfe ịkọ.
Nchịkọta Analytics Google
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị spammers na bots agaghị aga na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ị ​​ga-egbochi bọọlụ ndị a wee weghachite ha na weebụsaịtị ha site na ịtinye koodu pụrụ iche na akaụntụ Google Analytics. I nwekwara ike ịmepụta ihe nzacha na profaịlụ Google Analytics, ọ ga - enyere gị aka melite ogo okporo ụzọ gị. N'ụzọ dị mma, Google Analytics na-enye ọtụtụ ntinye aka iji kpochapụ ndị spammers na data nchịkọta na akụkọ. Nanị isi nke usoro a bụ na ọ gaghị etinye aka na weebụsaịtị niile n'otu oge.
Iji nhazi aka nhazi bot nhazi
Ị nwere ike iji aka hazie nzacha bot. Maka nke a, ị ga-aga na akaụntụ Google Analytics ma mepụta New Filter. Họrọ Nhọrọ omenala ma tinye koodu a kapịrị ọnụ na nke ahụ.
Imechi adreesị IP spam
Ị nwere ike igbochi ntinye IP adreesị spam. Mmasị nke igbochi okporo ụzọ na-abịa site na IP na-amaghị. I kwesiri ijide n'aka na enweghi ohere inweta spammers gi na ebe nrụọrụ weebụ gi site na omume a.
Nchịkọta Google Nchịkọta Nchịkọta Google
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji jide n'aka na ị chebere ndepụta nchịkọta Google nchịkọta Google Analytics. Ọ dị mkpa icheta na ị gaghị enwe ike ịnweta nsonaazụ kachasị mma ruo mgbe ị kwụsịrị ndepụta a. Nchịkọta Google na-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ iji wepu listi ma gbochie adreesị IP. Ị nwere ike ịhọrọ ma wụnye ngwa mgbakwunye na ebe nrụọrụ weebụ gị, hụ na nchekwa zuru oke na nchekwa ya.